काठमाडौं । चाड पर्वहरु नजिकीन थालिसके तर यता भने कोरोनाको महामारी कहिले सम्म हो, कसैलाई थाहा नै छैन् तर मानिसहरुले अब कोरोनासँग सधै यसै गरी बस्ने हो भने कोही पनि अगाडी बढ्न पनि सक्दैन । मानिसहरु विभिन्न किसिमका मानसिक तथा विभिन्न रोगहरु थपिने हो कि भन्ने डरले अब त मानिसहरुले आफूलाई खुसी राख्न विभिन्न उपायहरु अपनाउन थालि सकेका छन् । जुन आज कालिमाटीमा देखिएको एक दृष्यले प्रष्ट हुन्छ । मानिसहरु कोरोना हुँदा हुँदै पनि आफुलाई व्यस्त मस्त राख्नको लागि चंगा, लट्टाईहरु किन्नको लागि पसलमा भिडभाडका साथ ..
130009/8/2020 @ 19:55
काठमान्डौ , अचानक रिस उठ्ने आफ्नो बानी देखेर वाक्क हुनुभएको छ ? हामीमध्ये धेरैलाई रिसाउनु राम्रो होइन भन्ने थाहा छ, तर यति हुँदा हुँदै पनि स्वभाव र परिस्थितीले मानिसहरु पटक–पटक रिसाइरहेका हुन्छन् । यस्तो बानीले धेरै मानिसहरुलाई हानी पनि पुर्याइरहेको हुन्छ । रिसलाई यदि शान्त गरिएन भने यसले ठूलो रुप लिन सक्छ जसले रिसाउने मानिसलाई त नकारात्मक असर पुर्याएको हुन्छ भने उनको व्यवहारले उनका वरिपरि हुने मानिसहरुलाई समेत प्रभाव पारेको हुन्छ । आज हा मी तपाईंलाई रिस शान्त पार्ने तरिका बताउँदैछौँः ग्रीन टी ..
139601/30/2019 @ 17:11
अनलाइनबाटै यसरी खोज्नुहोस् बिहे गर्ने जोडी ..
141901/17/2019 @ 11:31
हनिमुन मनाउन काहा जाने ? धुमधाम गन्तव्य दुबई
जमघट गर्नु, मिठो-मसिनो खानु, नाचगान गर्नु जस्तै घुमघाम पनि खुसीको एक स्रोत हो । सधै कामधन्दा, करियर, पढाई, परिवारको चक्करमा लागिरहँदा हाम्रो जीवन निरास र दिक्कलाग्दो हुनपुग्छ । यस्तो अवस्थामा के गर्ने ? विकल्प हो, घुमघाम गर्ने । एकनासे र दिक्कलाग्दो दैनिकीबाट छुटकारा लिने उपाय हो, घुमघाम । अहिले त यो जीवनशैलीकै एक हिस्सा भएको छ । अक्सर बर्षमा एक दिन भएपनि परिवारसहित घुम्न निस्कने प्रवृत्ति विकास हुँदैछ । विश्वका मानिस खासगरी उन्नत मुलुकमा मानिसहरु घुमघामलाई जीवनकै प्राथमिकतामा राख्छन् । एक ..
1412012/30/2018 @ 20:55
मोबाइलको स्क्रिन फुट्यो ? मन्जनको प्रयोगबाट यसरी बनाउनुस् नयाँ जस्तै
काठमान्डौ | मन्जन भन्ने बितिकै हामी दाँतको सफाई गर्ने सामग्रीको रुपमा सम्झन्छौ | तपाइको सोच त्यतिमै मात्र केन्द्रित हुन्छ भने तपाइँ गलत हुनुहुन्छ | मन्जनलाई धेरै कुरामा प्रयोग गर्न सकिन्छ | मन्जनबाट तपाइको फुटेको मोबाईलको स्क्रिन नयाँ जस्तै बनाउन सक्नुहुन्छ | विज्ञान र प्रविधिमा तीव्र परिवर्तन भैरहेको बेला विश्वमा नयाँ नयाँ आविष्कार हुन थालेका छन् | मन्जनको चमत्कारले फुटेको मोबाईल जस्ताको तस्तै कसरी बनाउँछ ? हेर्नुस् भिडियोसहित:- यस बिषयमा तपाइको प्रतिक्रिया...! ..
1455012/30/2018 @ 20:48
घरकी प्रिय् बुहारी बन्न यस्ता टिप्स अपनाउनुहोस
अक्सर प्रेममा युवा जोडी बहकिन्छन् । उनीहरुको प्रेम केवल शारीरिक आकर्षणबाट सुरु हुन्छ । एउटा भनाई छ नि, प्रेम आँखाबाट सुरु हुन्छ र दिलमा पुगेर टुंगिन्छ । प्रेम-जीवनमा केवल उनीहरुलाई एकअर्काको सामिप्यता भए पुग्छ । गफ गरौं, डेटिङ जाऔं, रोमान्स गरौं । बस्, यस्तै चक्करमा हुन्छन् उनीहरु । र, यस्तो बेला एकअर्काको आनीवानी, प्रवृत्ति, स्वभावबारे खास हेक्का हुँदैन । वा कसैको प्रवृत्ति र स्वभाव केलाएर कसैले प्रेम गर्दैन । यसको अर्थ युवाहरु प्रेम गर्नका लागि युवतीहरुमा धेरै मापदण्ड आवश्यक देख्दैन । केवल प ..
1393012/30/2018 @ 20:42
के तपाइको स्मार्टफोन तात्छ? यसरी जोगाउनुस्
काठमाडौं- प्राय अहिलेका पुस्ता सूचना प्रविधिमैत्री भइसकेका छन्। उनीहरुले गोजीमा एउटा वा दुइटासम्‍म स्मार्ट फोन बोक्‍ने गरेका छन्। जति फाइदा स्मार्टफोनमा छ, त्यति नै दु:ख दिने समस्‍या पनि छ। बेलाबेला स्मार्टफोनहरु कुराकानी गर्दा-गर्दै वा आपसेआप तात्‍ने गरेको छ र केही त पड्किने गरेको पनि छ। यसका साथै स्मार्टफोन तातेपछि सक्रीनमा म्‍यासेज एरर देखाइदिने हुन्छ। खासमा स्मार्टफोन किन तात्छ ? सम्मार्टफोन तात्‍नु एउटा सामान्‍य प्रकिया हो। यो तात्नुको मुख्‍य कारण हो मोबाइलको हार्डवेयर। मोबाइल धेरैबेरसम् ..
1430012/15/2018 @ 21:09
तीन कुरा जस्ले तपाईंलाई सधैँ खुशी रहन सिकाउँछ
तपाईंले हेक्का राख्नु भएकै होला, आफ्ना आसपासमा केही यस्ता व्यक्ति हुन्छन् जो सधै खुसी देखिन्छन् । उनिहरुको अनुहारमा चिन्ता, तनाव, आक्रोस, दुःख केहीपनि देखिदैन । त्यसोभए के उनिहरुलाई कुनै दुख छैन ? कुनै समस्याले घेरेको छैन ? संसारमा यस्ता व्यक्ति सायदै होलान्, जोसँग कुनै समस्या छैन । हुनसक्छ कोही बढी दुःखी होलान्, कोही कम । कसैलाई बढी समस्या होला, कसैलाई कम । समस्या छ तर पनि कतिपय व्यक्ति खुसी देखिन्छन् । हामीलाई के भ्रम छ भने, जब हामी धनदौतलले सम्पन्न हुन्छौं , घर, गाडी, जग्गा, बैंक ब्याले ..
1442012/15/2018 @ 21:02
कुनै राम्री केटी बाटोमा हिँडिरहँदा धेरै केटाहरुको नजर पर्छ । उनीहरु केटीलाई घुरेर हेर्ने मात्र होइन, आँखा झिम्क्याउन, जिब्रो पड्काउनसम्म पछि पर्दैनन् । उस्तैले त ‘आई लभ यू’ नै भनिदिन्छन् । तर, केटीहरुको हकमा यो लागू हुँदैन । केटीहरु स्वभावैले लजालु हुने भएकाले केटाहरुलाई जिस्क्याउने त आँटै गर्दैनन् । बाटो हिँडिरहेको कुनै पुरुष मन पर्‍यो भने उनीहरु खुलेर व्यक्त गर्न सक्दैनन् । चोरी-चोरी हेर्छन् । त्यसैले उक्त पुरुषले थाहै पाउँदैन कि कुन केटीले उसलाई मन पराइरहेकी छिन् । तथापि, यस्ता केही संके ..
1487012/15/2018 @ 19:18
चिसो सुरु हुनासाथै रुघाखोकी लाग्नु र घाँटी खराब हुनु आम समस्या हो । यसबाहेक चिसो मौसममा धेरै हुने अर्को समस्या छातीमा कफ जम्ने हो । छातीमा कफ जम्नाले सास फेर्न मात्रै समस्या हुँदैन, यसले अरु धेरै समस्याहरु जन्माउँछ । यसबाट छुटकारा पाउनको लागि मानिसहरुले विभिन्न किसिमका औषधिको सेवन गर्छन् । तर, कुनै सफलता हात पर्दैन । आज हामी तपाईंलाई केही घरेलु उपायहरु बताउन गइरहेका छौं जसले कफ जम्ने समस्यालाई सजिलै समाधान गर्छ । मह र कागती एक चम्चा अर्गानिक मह र २ चम्चा कागतीको रस मिसाएर पिउनुहोस् । यसले ..
1420012/15/2018 @ 19:13
पूरा पढ्नुहोस् 15300
केटीले मन पराएको थाहा पाउन जान्नुस यी संकेत4870
मोबाइलको स्क्रिन फुट्यो ? मन्जनको प्रयोगबाट यसरी बनाउनुस् नयाँ जस्तै4550
यी हुन् विदामा घुम्न जाने २० ठाउँ4430
तीन कुरा जस्ले तपाईंलाई सधैँ खुशी रहन सिकाउँछ4420
के तपाइको स्मार्टफोन तात्छ? यसरी जोगाउनुस्4300
चिसोले छातीमा कफ जम्यो ? घरेलु उपचार छँदैछ नी4200
अनलाइनबाटै यसरी खोज्नुहोस् बिहे गर्ने जोडी4190
यी हुन् यौनाङ्ग स्वस्थ्य राख्न महिलाले जान्नै पर्ने आठ कुरा4140
हनिमुन मनाउन काहा जाने ? धुमधाम गन्तव्य दुबई4120
थप जिवन शैलिका खबरहरु